Arday badan oo aan lahayn gaadiid | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha Aagga Stillwater ISD 834
Sebtember 3 , 2021
Hoggaamiyayaasha degmada ayaa la ogeysiiyay dabayaaqada toddobaadkan in iibiyaha gaadiidkeennu uusan awoodin inuu helo darawalo waddooyin badan oo basaska ah. Tani waxay ka dhigan tahay in tiro ka mid ah ardayda Dugsiga Dadweynaha ee Aagga Stillwater, iyo sidoo kale tiro ka mid ah jaartarka iyo ardayda dugsiyada aan dawliga ahayn, ay noqon doonaan gaadiid la'aan laga bilaabo Talaadada, Sebtember 7.
Qoysaska ay saamaysay waxaa si toos ah loogu wargelin doonaa iimayl iyo taleefan si loo siiyo wakhti intii suurtogal ah si ay isugu dayaan inay sugaan gaadiid kale.
Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay in darawalada beddelka aan la heli karin, taas oo saamayn ku yeelan karta waddooyinka kale ee baska. Tani waxay keeni kartaa dib -u -dhac ku yimaada baska ama kansarada waddada oo dheeraad ah.
Waxaan aqoonsannahay sida ay muhiimka u tahay in la helo gaadiid badbaado leh oo la isku halleyn karo oo loogu talagalay ardaydeena, waxaana sii wadi doonnaa inaan sameyno wax kasta oo aan awoodno si aan arrimahan ugu xallino waqti habboon. Waxaan sidoo kale ka shaqeyn doonnaa inaan la xiriirno qoysaska ogeysiiska ugu badan ee suurtogalka ah marka baska dib loo dhigo ama gaadiid la heli waayo.
Haddii aad qabtid su'aalo gaar ah, fadlan kala xiriir waaxda gaadiidka 651-351-8377 ama iimayl u dir schoolbus@stillwaterschools.org . Waxay helayaan wicitaano iyo emaylo badan waqtigan, markaa fadlan samir haddii aadan isla markiiba soo marin.
Adiguna waad caawin kartaa
Fadlan nala soo socodsii haddii aad awooddo inaad ballanqaado bixinta gaadiid kale beddelka dhammaan simistarka koowaad (illaa Janaayo 21, 2021) adigoo dhammaystiraya foomka Gaadiidka Diidmada ah . Tani waxay noo oggolaanaysaa inaan dib-u-hagno basaskeenna oo aan hagaajinno karti-xirfadeedka si aan si wanaagsan ugu adeegno ardayda aan haysan waddooyin kale oo ay dugsiga ku tagaan.